Dowladda Australia oo Liiska Argagixisada ku Dartay Daacish-taSoomaaliya – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
DFS oo Loogu Baaqay in Ciqaabta Laga Qaado Shacabka Muqdisho+Dhageyso
Ciidamadii Dowladda Soomaliya Geysay Gedo oo Jubbaland Isku Dhiibaya
MW Qoor-qoor oo Bilaabayo Wada-hadalo uu Lagalayo Xaaf iyo Ahlusunna+Dhageyso
Farmaajo:-“Qofka Diida Sharciga Doorashooyinka Waa Mid Diidan Dowladdinimada”,+Dhageyso
Ahlusuna oo Lagala Wareegay Dhaqaalihii Garoomada Dhuusamareeb iyo Guriceel
Farmaajo oo Xil Ka Qaadis Ku Sameeyay Taliye Ku-xigeenkii Xoogga Dalka
Maxaa Ka Jira in Madaxweyne Xaaf uu La Heshiiyay Dowladda Soomaaliya?
Dowladda Australia oo Liiska Argagixisada ku Dartay Daacish-taSoomaaliya
Dowladda Australia ayaa markii ugu horeesay ku dartay liiska argagixisada daacishta ka dagaaalanta gudaha dalka Somaliya kadib war ka soo baxay sirdoonka iyo guddiga amniga dalka Australia.
General heather cook oo u hadlay dowladd Australia ayaa tilmaamay in daacish ay weeraro argagixiso kafuliyaan wadamada reer galbeedka weeraradaasi oo ah kuwa argagixiso.
“kooxaha argagixisada oo ay kamidyihiin daacishta kusugan Somalia waxa ay bartilmaameed sadaan muwaadiniinta reer galbeedka iyagoo ugeesta afduubyo ey ku dalbadaan lacago madaxfurasho “ ayaa lagu yiri hadalka kasoo baxay dowlada Australia.
Sirdoonka iyo guddiga amniga Australia ayaa ku qiyaasay tirade kooxaha daacishta ee kadagaalama gudaha Somalia ugu yaraan 200 boqol oo xubnood kuwaasi oo fuliyay weeraro is xig xiga sida ay qortay warbaahinta austarlia .
Lix weerar ayay fuliyeen daacishta ka dagaalanta Somaliya sidaa ayaa lagu yiri warbixanta ey soo saartay dowlada Australia oo markii ugu horreesay liiska argagixisada ku dartay daacishta kadagaalanta gudaha dalka Somalia.
Waxa kamid ah dilal qorsheesan oo loo geestay sarakiil iyo xubo ajaanib ah oo ey kujiraan muwaadiniin itoobiyan ah,weeraro ey kuqaadeen hoteello,qaraxyo loo adeegsaday baabuurta laga soo buuxiyay walxaha qarxa kuwaasi oo lala beegsaday ciidamada nabad ilaalinta midowga Africa ee kusugan Somalia ee magacoda loo soo gaabiyo amisom.
Kooxda daacish ayaa weeraro qorsheesan kafuliya gudaha dalka Somalia kuwaasi oo ey kubartilmaameedsadaan shaqsiyaad oo kaladuwan oo ushaqeeya dowlada federaalka Somalia.